အီးမေးလ်နဲ့ ဖြန့်နေကြတဲ့ အပေါ်ကစာကို မြင်ပြီး ဧရာဝတီဘလော့မှာ သွားပြောင်လိုက်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့မှာလည်း ကော်ပီ ကူးထည့်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ စာ ၈ မျက်နှာ ရှိတယ်။
အပြည့်အစုံ ဖတ်ဖို့ အချိန် ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီလင့် ကို သွားပါ။
ပတက - သန်းရွှေ
န၀တတ - ရှစ်လုံး
ထပ - အောင်သိန်းလင်း
လူမြင်ကွင်း ထွက်အောင် ခိုင်းထားတဲ့ အတိုင်း န၀တတ - ရှစ်လုံးတဦးတည်း သေချာ စီစဉ်လုပ်ဆောင်ပါ၊ လိုအပ်ရင် ယတြာ ချေပါ။ စီစဉ်တဲ့ အချိန်မှာ အင်္ဂါသားကို ဆင်ကြယ်ဖိနပ်စီးခိုင်းပြီး အရှေ့မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူပြီး စ-ဓ-ဗ-၀ စားတတ်ရင် ဗိုလ်ချုပ်တွေ ၀တယ် လို့ စိတ်ထဲကနေ အတွင်းအားနဲ့ ၅ ကြိမ် ရွတ်ခိုင်းပါ။ ပြီးရင် စနေထောင့်မှာ ပန်းလှူပါ အဲ - အနောက်ဘက်ကို ကိုယ်ဖော့ပညာနဲ့ ကွမ်းတယာညက်လောက်ကြာအောင် ပြေးခိုင်းပါ။ ဒါဆို ငါတို့ စီမံကိန်း အောင်ပြီ။
စာကြွင်း - Mr. Creator ဆိုတဲ့ ဒီဇိုင်းဆရာတယောက်က ငါ့ ဓာတ်ပုံ တခု ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ထားတယ်လို့ ကြားတယ်။ အီးမေးနဲ့ ဖြန့်တာ မြင်ရသူတိုင်း သဘောကျတယ်လို့ ဆိုတယ်။
အားကျမခံ နာလဲ ထပ်ပြီး ဖြန့်လိုက်သေး.. ဟုတ်ချင်ဟုတ် မဟုတ်ချင်နေ.. ဟေ..ဟေ့..။
Great, Ko Zarni. Bravo! I found it accidentally. I would like to encourage you to keep on writing satires. It's rare, and the road less traveled. K2 :-)